07 / 11 / 2019 28 / 01 / 2020 ရော့ Paton 6469 Views စာ0မှတ်ချက် ၇၆၁၃၉ ၁၉၈၉ Batmobile, Batman, Jack Nicholson, ဂျိုကာ, Julian Caldow ပါ, ကင်မ်အခွခေံ, Lego, Lego Batman, Lego Batmobile, Lego, DC စူပါသူရဲကောင်းများ, lego ပြန်လည်သုံးသပ်, Michael keaton, Tim Burton, Vicki Vale
ညင်ညင်သာသာသောခါးဆစ်နှင့်သိမ်မွေ့သောအသေးစိတ်အချက်အလက်များသည်အံ့သြဖွယ်ရာထောင့်တိုင်းကိုဖမ်းယူသည် Batmanစီးပါတယ် Lego Batman ၇၆၁၃၉ ၁၉၈၉ Batmobile
စျေးနှုန်း: £ 219.99 / $ 249.99 / € 249.99 အပိုင်းပိုင်း: 3306 ရရှိနိုင်ပါ: နိုဝင်ဘာလ 29
2019 သည် Batmobile ၏နှစ်ဖြစ်သည်။ ဒါကြောင့်တစ် ဦး ၏ကောင်းတဲ့သတိပေးချက်အဖြစ်ဆောင်ရွက်ပါသည်နေစဉ် Lego ကုမ္ပဏီအနေဖြင့်ကုမ္ပဏီအနေဖြင့်ရံဖန်ရံခါ quirks များ၊ ၃၀ ကိုဆက်တိုက်ဆက်တိုက်ဖြန့်ချိခြင်းကိုတွေ့မြင်ရခြင်းသည်ပုံမှန်မဟုတ်ဘဲ၊ ၎င်းသည် ၈၀ ဖြစ်သော်လည်းth ၏နှစ်ပတ်လည် Batman (လည်း 80 ဖြစ်ပါတယ်th Batmobile ၏နှစ်ပတ်လည်နေ့) ။ တူညီမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆွေးနွေးငြင်းခုံမှုတွေဆက်ရှိနေမယ် 76119 Batmobile: အ Joker ၏လိုက်စား နှင့်လာမည့်မြှင့်တင်ရေးလွှတ်ပေးရန် ၇၆၁၃၉ ၁၉၈၉ Batmobileနှင့်အဆုံးစွန်သောအရအဆုံးစွန်သောရရန်လိုအပ်သောငွေပမာဏကိုတန်ဖိုးရှိလိမ့်မည်ရှိမရှိ * ။ သို့သော်အများဆုံးသေဆုံးသည် Lego Batman ပရိတ်သတ်တွေကညည်းညူမှာမဟုတ်ဘူး ၇၆၁၃၉ ၁၉၈၉ Batmobile ဆွေးနွေးမှုသို့။ အမှန်မှာယင်း၏ကြီးမားသောအတိုင်းအတာနှင့်စျေးနှုန်းအချက်နှင့်၎င်းအချက်များကသော့ဖွင့်နိုင်သည့်အလားအလာအတွက်ဖြစ်သည် Lego ဒီဇိုင်နာတွေ၊ နှိုင်းယှဉ်တာမရှိဘူး
*၇၆၁၃၉ ၁၉၈၉ Batmobile ဝယ်ယူမှုနှင့်အတူလက်ဆောင်တစ်ခုအဖြစ်ရရှိနိုင်ပါသည် ၇၆၁၃၉ ၁၉၈၉ Batmobileနှင့်ရရှိနိုင်တန်ဖိုးရှိစေသည်လုယူသောသူသတိပေး ...
ဤကဲ့သို့သောအရွယ်အစားကြီးသည့် display model များသည်လူတိုင်းကြိုက်နှစ်သက်နိုင်မည်မဟုတ်ပါ။ ၇၆၁၃၉ ၁၉၈၉ Batmobile အရာအားလုံးကိုသူ့စွမ်းအားနဲ့ ၃၃၀၆ အပိုင်းအစတိုင်းကိုသွေးဆောင်ဖို့လုပ်တယ် Lego ပန်ကာနဲ့ Batman ပန်ကာ။
Brick Fanatics LEGO Collectible Minifigures 71026 DC ရုပ်ပြသုံးသပ်ချက်များ
အဆိုပါ ၇၆၁၃၉ Batmobile ခေတ်မီရုပ်ရှင်၏ထူးခြားထင်ရှားသောနှင့်အထင်ကရယာဉ်များအနက်မှနှာခေါင်းအတွက်ထူးခြားသည့်ဂျက်အင်ဂျင်တာဘိုင်နှင့်အနိမ့်အနိမ့်နက်နက်ရှိုင်းသောတံတားတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်ကိုယ်ထည်ရှည်လျားသောကိုယ်ထည်တစ်လျှောက်ရှိချောမွေ့သောကွေးများအထိဖြစ်သည်။ အထူ, မှောင်မိုက်အနက်ရောင်ထဲမှာဖုံးလွှမ်းအရာအားလုံးနှင့်အတူ။ ရုပ်ရှင်မတိုင်မီကဤကဲ့သို့သောအရာများကိုတစ်ခါမှမမြင်ဖူးခဲ့ပါ။ လွန်ခဲ့သည့်ဆယ်စုနှစ်သုံးခုအတွင်းအနည်းငယ်မျှနီးကပ်လာခဲ့သည်။
ဒီကားဟာလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း ၃၀ ကပြသခဲ့တာကစပြီးနှစ်သက်စရာကောင်းလောက်အောင်စွဲမက်ဖွယ်ရာဖြစ်ပြီးချစ်ခြင်းမေတ္တာရှိသူတွေအပါအ ၀ င်ပရိသတ်အသစ်တွေကိုဆွဲဆောင်ဖို့ဒီနေ့အထိပဲ။ Lego. Flickr မှအမြန်ရှာဖွေခြင်း p အဖြစ်ကဲ့သို့သောသရုပ်ပြအဖြစ်သေချာပါတယ်articular နှင့်ကဆန္ဒရှိလက်သမားဖို့ရှိကြောင်းဆက်လက်ဆွဲ။ အများအပြားက Lego ပန်ကာက၏ရှုပ်ထွေးသောခါးဆစ်ကိုဖမ်းယူဖို့ကြိုးစားခဲ့ပါတယ် ၇၆၁၃၉ Batmobile, အမျိုးမျိုးသောအကြေးခွံများနှင့်အောင်မြင်မှုအမျိုးမျိုးဒီဂရီရန်။
ဒီတော့ဘယ်လိုလုပ်သလဲ Lego ၁၉၈၉ Batmobile ပုံစံကိုပြန်လည်တည်ထောင်ရန်ကုမ္ပဏီ၏ပထမဆုံးသောအကျိုးတူလုပ်ငန်း? သင်မျှော်လင့်ထားသည့်အတိုင်းကြီးမားသောအံ့သြဖွယ်ကြီးမားသောဤခေတ်တွင် Lego ဘတ်ဂျက်နှင့်အပိုင်းအစအရေအတွက်၏ဖန်တီးမှုစိတ်ကူးဖို့အလယ်တန်းရှိရာအစုံ Lego ဒီဇိုင်နာများ။
အစစ်အမှန်ဘဝနှင့်မျက်နှာပြင်ပေါ်တွင်မော်တော်ယာဉ်၏အသွင်အပြင်နှင့်သဘောထားကိုသတ်မှတ်ထားသောအရာအားလုံးသည်အလွန်ထူးခြားစွာဖမ်းဆီးရမိသည် ၇၆၁၃၉ ၁၉၈၉ Batmobileပိုမိုကြီးမားသောပမာဏထက်သေးငယ်သောပုံစံဖြင့်တည်ဆောက်ထားသည် (၂၀၁၄ ခုနှစ်၏ ၇၆၀၂၃ The Tumbler နှင့်အတူတူပင်) ။ ဒါက Lego p ကြည့်သောအစုံart ထိုကဲ့သို့သောထူးခြားသောရှည်လျားသောဘောင်ကိုပုံသွင်းပေးသည့်ချောမွေ့သောလိုင်းများနှင့်သိမ်မွေ့သောမျဉ်းကြောင်းများကိုရိုက်ကူးခြင်းအားဖြင့်ထိုအမှောင်၊
တစ်ချိန်တည်းမှာပင်ဆောက်လုပ်ရေးအဆင့်တိုင်းနီးပါးတွင်အဓိပ္ပာယ်ရှိသောပုံစံတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဟုတ်ပါတယ်။ အဲဒီကွေးကောက်အုတ်တွေကိုအဲဒီမှာသုံးထားတယ်။ စတီယာရင်နဲ့အတွင်းပိုင်းယန္တရားကိုဘယ်လိုပုံစံမျိုးနဲ့ဖန်တီးခဲ့တာလဲ။ ခန္တာကိုယ်ကကလစ်တွေနဲ့ဘားတွေသုံးပြီးဒီနေရာကိုထောင့်ချိုးထားတယ်။ လေယာဉ်မှူးထိုင်ခုံကိုဘာကြောင့်မတည်ဆောက်သင့်တာလဲ။ ဒီလိုမျိုးကိုယ်ထည်ကဘာလဲ။ အများဆုံး p သည်art, ဤသည်တည်ဆောက်ပုံသည်စည်းမျဉ်းကိုပြန်လည်ရေးရန်မမျှော်လင့်ဘဲမည်မျှ sm ကိုသတိပေးရန်သာဖြစ်သည်art အ Lego ကွဲပြားခြားနားသောထောင့်များနှင့်တည်ဆောက်ပုံသည်မည်မျှလိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်စနစ်သည်ဖြစ်နိုင်သည်။ သင်လေယာဉ်မှူးဆီမရောက်ခင်အထိပါပဲ။ နောက်ပိုင်းတွင်ထိုအကြောင်းပိုမို။
Brick Fanatics LEGO Collectible Minifigures 71026 DC ရုပ်ပြပုံပြခန်းကိုတင်ဆက်သည်
ဒီတည်ဆောက်မှုဟာဒီအရွယ်အစားအတွက်မြန်မြန်ဆန်ဆန်အတူတကွလာတာပါ၊ ဒါပေမယ့်အဲဒါကမှိုင်းလို့လွယ်တယ်လို့မဆိုနိုင်ပါဘူး။ Bat ပုံသဏ္shapeာန်မည်သို့ပုံဖော်သည်နှင့် Bat-fans များသည်ကျေနပ်နှစ်သိမ့်မည့်ပုံစံကိုအတူတကွပေါင်းစပ်ရန်အချိန်များစွာရှိသည်articularly အမျိုးမျိုးသော p အဖြစ်တည်ဆောက်ခြင်း၏အဆုံးစွန်သောတစ်ဝက်၌တည်၏artအဆိုပါ bodywork မှ s ကိုပုံစံယူပါ။ ဤသည်မှကြည့်ရှုရန်ဤမျှလောက်ကြောက်မက်ဘွယ်သောထောင့်တွေအများကြီးရှိကြောင်းမော်တော်ယာဉ်နှင့်တည်ဆောက်မှုသင်စင်မြင့်အားဖြင့်ကားတစ်စီးဇာတ်စင်မှရှုထောင့်ဖြည့်စွက်ရန်ခွင့်ပြု, အလွန်လေးမွတျလမ်းအတွက်ကျင်းပ။
ပြီးစီးခဲ့သောမော်ဒယ်သည်မည်သည့် ဦး တည်ချက်မှမဆိုကြည့်ရှုနိုင်သောအရာဖြစ်ပြီး၎င်းကို Batmobile အတွက် Batcave ၏ turntable နှင့်ဆင်တူသော turntable display stand ဖြင့်မြင်တွေ့နိုင်သည်။ ၃.၅ ကီလိုဂရမ်ကျော်သောကြောင့်၎င်းသည်ပေါ့ပါးမှုမရှိပါ။ သင်မောင်းနှင်ပါကပျံသန်းနိုင်သောအပိုင်းအစများနှင့်အတူနူးညံ့သိမ်မွေ့သောတည်ဆောက်မှုမဟုတ်ပါ။ နောက်ဆုံးမော်ဒယ်ကိုယူရာတွင်ချောချောမွေ့မွေ့နှင့်အရည်တည်ဆောက်မှုသည်အထူးသဖြင့်၎င်းကိုအဓိကအားဖြင့်သုံးခုကဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်ဟုစဉ်းစားသောအခါထူးခြားသည် Lego ဒီဇိုင်းနာများ၊artယာဉ်၏။
ယင်းတို့မှာအသေးစိတ်နှင့်ရွေးချယ်ထားသောတည်ဆောက်ပုံ၏အာရုံစူးစိုက်မှုဖြစ်သည်၊ သို့သော်သူတို့၏ပေါင်းစပ်ကျွမ်းကျင်မှုသည်ရှုထောင့်တိုင်းကိုမြှင့်တင်ရန်ကူညီသည် ၇၆၁၃၉ ၁၉၈၉ Batmobileဆိုလိုသည်မှာအာရုံစူးစိုက်မှုသည်မည်မျှစည်းလုံးညီညွတ်မှုအပေါ်တွင်မူတည်သည်မဟုတ်ပါ၊ ပျင်းစရာကောင်းတဲ့နာမဝိသေသနဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပေမယ့် Batmobile ဟာအမြဲတမ်းအရာရာတိုင်းရဲ့အထွbeen်အထိပ်ဖြစ်ခဲ့တယ် Batman ဒါကအရမ်းအေးလွန်းလို့ဒီ ၃,၃၀၆ အပိုင်းမှာရှိနေတယ် Lego set - အထက်တွင်ဖော်ပြခဲ့သည့်အတိုင်း, ဒီမော်ဒယ်အသေးစိတ်နှင့်ထောင့်, ဒါပေမယ့်သဘောထားနှင့်အနှစ်သာရမသာဖမ်းယူ။ ၁၉၈၉ Batmobile ဖန်သားပြင်ကို ဦး ဆုံးယူစဉ်ကကဲ့သို့သင်ဤရှုထောင့်ကိုကြည့်ခြင်းနှင့်အတူတူပင်ခံစားရသည်။
ဤစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာတုံ့ပြန်မှုသည်အသေးစားဓာတ်ပုံသုံးခုအထိပါကျယ်ပြန့်သည်။ အဓိကအားဖြင့်ရည်ရွယ်ထုတ်လုပ်ထားသည့်ရော်ဘာပုံစံကြွေများကြောင့်ဖြစ်သည် ၇၆၁၃၉ ၁၉၈၉ Batmobile'' s ကို Batman။ ဤရွေ့ကားမဆိုထိုက်တန်သုံး minifigures ဖြစ်ကြသည် Lego Batman ပန်ကာရဲ့စုဆောင်းမှုနှင့်အသေးစိတ်တန်ဖိုးထားခြင်းနှင့်ဓာတ်ပုံ၏ဆက်ဆက်ထိုက်တန်ပါတယ်, ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Minifigure အာရုံစိုက်ကြည့်ပါ.
အခြားနေရာများတွင် play function များသည်အရွယ်အစားနှင့်အသေးစိတ်တည်ဆောက်မှုကိုသင်မျှော်လင့်သလိုဖြစ်သည် - သက်ဆိုင်ရာနှင့် sm သာဖြစ်သည်art။ တစ်နည်းပြောရလျှင်အနည်းငယ်မျှသာရှိသော်လည်းတစ်ခုချင်းစီသည်ကစားခြင်းကိုအခြေခံသည်ထက် ပို၍ တန်ဖိုးရှိလှသည်။ ပထမတစ်ခုသည် fender တစ်ခုစီမှ panel တစ်ခုကိုဖယ်ထုတ်ပြီး M1919 Browning machine guns နှစ်ခုကိုတွန်းရန်နောက်ဘက်တပ်ဆင်ထားသော afterburner ကိုလိမ်ရန်လိုအပ်သည်။
ဤအတောအတွင်းရှေ့ဘီးများကိုကန့်သတ်ထားသည့်စတီယာရင်ဖြင့်လှည့်နိုင်သည်။ သို့သော်အကန့်အသတ်ဖြင့်သာရပ်နားထားသည်။ တတိယနှင့်အထင်ရှားဆုံးကစားနည်းမှာလေယာဉ်မှူးမည်သို့ဖွင့်သည်ကိုဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်အချို့မှတစ်ဆင့်သာတွဲထားသည် နည်းပညာ ရှည်လျားသောစုံတွဲတစ်တွဲတလျှောက်လျှောကြောင်းအုပ်ကြွပ် နည်းပညာ ၀ င်ရိုးများရှိသော်လည်းဤရိုးရှင်းသောနည်းစနစ်ပတ် ၀ န်းကျင်သည်အလွန်ကောင်းမွန်သည်။ ၎င်းသည်မည်သို့လည်ပတ်သည်နှင့်လေယာဉ်မှူး၏ပုံသဏ္andာန်နှင့်ထောင့်တို့ကိုအသေးစိတ်ကျအောင်မည်ကဲ့သို့ခွင့်ပြုသည်စသည်တို့အတွက်ဖြစ်သည်။
အမှန်မှာ၊ ဒီဇိုင်းအဖွဲ့သည်ရည်ညွှန်းစာရွက်စာတမ်းများကိုအာရုံစိုက်ရန်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။ မြတ်သောအမိုးသည်ရူပကာအတွက်အထူးပုံသွင်းထားသောကားရှေ့မှနျအပိုင်းအစကိုအားကိုးရန်ပထမတစ်ချက်တွင်ပေါ်လာနိုင်သော်လည်း Element Designer Jaime Sanchez Potter က set ၏လမ်းညွှန်လက်စွဲတွင်ထောက်ပြသကဲ့သို့၎င်း၏ဒီဇိုင်းသည်လုပ်ဆောင်မှုတွင်လည်းအရေးကြီးသည်။ ၎င်းသည် self-support စနစ်ဖြင့်ဖွင့်လှစ်လိုက်သည်။ သို့သော်တည်ဆောက်မှုတစ်ခုအနေဖြင့်ကစားခြင်းတွင် ပို၍ အရေးကြီးသောအရာတစ်ခုရှိသည်။ မြတ်သောအရာသည်အခြားနေရာတွင်မည်သို့နေရာကျသည်ကို ကျေးဇူးတင်၍ ဖြစ်သည်။
အဆိုပါ Lego အလျားလိုက် ၀ င်ရိုးတစ်လျှောက်ရွေ့လျားနေသောလှိမ့်သောလုပ်ဆောင်မှုကိုဖွင့ ်၍ ပိတ်လိုက်သောလေယာဉ်မှူးအုပ်စုသည်အလွယ်တကူအခြေချနိုင်သည်၊ အရေးကြီးသည်မှာသူတို့သည် Batmobile ၏သိမ်မွေ့လှသောထောင့်အပြောင်းအလဲများကိုအပြည့်အဝဖမ်းယူနိုင်ရန်အချိန်နှင့်ကျွမ်းကျင်မှုများကိုအပြည့်အဝဖမ်းယူနိုင်ခဲ့သည်။ တံခါးပိတ်သောအခါ, မြတ်သောသည်အခြားအရာမှတဆင့်ပူးတွဲမထားပါ နည်းပညာ ကြွေပြားများနှင့် ၀ င်ရိုးများရှိသော်လည်း၎င်းသည်ရှေ့ဆုံးတွင်ပြတ်သားမှုနှင့်အတူအလွန်အရေးကြီးသောအစဉ်အမြဲနေရာယူထားသည်။ အဲဒါနဲ့နှိုင်းယှဉ်ဖို့ခက်ပါတယ် Lego လက်သမားတစ် ဦး အတွက်ကြုံတွေ့ကြလိမ့်မည် Lego သင်၏မျက်လုံးများကိုမည်သည့်နေရာမှချက်ချင်းဆွဲယူပြီး၊xtra authenti အဆင့်city မော်ဒယ်ကိုပေးသောဇာတ်ကောင်နှင့်၎င်းသည်တန်ဖိုးအရှိဆုံးအသေးစိတ်ဖြစ်သည်။
၎င်းသည်မည်သို့နှင့်အဘယ်ကြောင့်အတွက်ဂျင့်ဖြစ်သည် ၇၆၁၃၉ ၁၉၈၉ Batmobile ဒါတိကျစွာနှင့်ဒါperfectlyုံအတူတူလာပါတယ်။ ၎င်းသည်ရည်ညွှန်းထားသည့်အရာမှန်သည်၊ တည်ဆောက်ရန်ပျော်စရာကောင်းသည်။ ၇၆၁၃၉ ၁၉၈၉ Batmobile အရာအားလုံး Batman ပရိသတ်တွေမျှော်လင့်ပါတယ်လိမ့်မယ်, Lego ပရိသတ်တွေတန်ဖိုးထားနိုင်ပါတယ် Lego Batman ပရိတ်သတ်တွေစိတ်အားထက်သန်စွာအဆောက်အ ဦး စောင့်ဆိုင်းပါလိမ့်မယ်။ ဒီဟာကိုလွဲချော်ဖို့အစုတခုမဟုတ်ပါ
ဤမိတ္တူ ၇၆၁၃၉ ၁၉၈၉ Batmobile အဆိုပါအားဖြင့်ပြန်လည်သုံးသပ်ဘို့ထောက်ပံ့ပေးခဲ့ပါသည် Lego အုပ်စု။ သို့သော်ဖော်ပြသောထင်မြင်ချက်များအားလုံးသည်တစ်ခုတည်းသောအမြင်များဖြစ်သည် Brick Fanatics. ကျွန်ုပ်တို့သည် ၀ က်ဘ်ဆိုက်တစ်ခုအနေဖြင့်လုပ်ဆောင်သောအလုပ်များကိုထောက်ပံ့ပါ မဂ္ဂဇင်း သင့်ရဲ့ဝယ်ယူခြင်းအားဖြင့် Lego ကျွန်တော်တို့ရဲ့မှတဆင့် တွဲဖက်လင့်ခ်များ.
၇၆၁၃၉ ၁၉၈၉ Batmobile နိုဝင်ဘာ ၂၉ ရက် မှစတင်၍ ရနိုင်သည် LEGO.com။ သင်ကူညီနိုင်သည် Brick Fanaticsငါတို့သုံးပြီး '' အလုပ် တွဲဖက်လင့်ခ်များ.
← Lego Batman 40433 1989 Batmobile - Limited Edition သည် ၀ ယ်ရန်အခမဲ့လက်ဆောင်ပေးသည်
Lego Batman 76139 1989 Batmobile minifigure မီးမောင်းထိုး →